Qalab Sports oo loogu deeqay degmada Wardhiigleey – Radio Muqdisho
Qalab Sports oo loogu deeqay degmada Wardhiigleey
Maamulka gobolka Banaadir ayaa qalab isbortis ugu deeqay degmada Wardhiigleey.
Gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca arrimaha bulshada ayaa qalab isborts oo loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo kooxaha ka ciyaara degmada Wardhiigleey.
Gudoomiyaha degmada Wardhiigleey Yaasiin Nuur Ciise oo qalabkaas isborts gudoomay ayaa sheegay in uu dhiirigelin u yahay kooxaha ka ciyaara waaxyaha ay ka koobantahay degmada.
Wuxuu tilmaamay in isortigu uu kalinta ugu horreeyso kaga jiro isdhexgalka bulshada, isagoo intaa raaciyay in dhawaan degmadaasi ay ka bilaaban doonaan tartamo isborts oo xiiso leh.
Yaasiin Nuur Iikar gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca arrimaha bulshada ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu dhiirigelinayo horumarinta isbortiga, maadaama uu qeyb libaax ka qaadan karo nabadda iyo isdhexgalka bulshada.
AC Milan oo Ka Badisay Napoli iyo Fiorentina oo Ka Adkaatay Cesena “SAWIRRO”
Dhgeyso warka subax ee Radio Muqdisho